उमंगको पर्व दशैं - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	उमंगको पर्व दशैं
उमंगको पर्व दशैं
by Tanahu Awaj 22nd October 2020 22nd October 2020
22nd October 2020 22nd October 2020 49 views
दशैं अर्थात विजया दशमी, यो नाम उच्चारण मात्रले पनि हरेक नेपालीलको मनमा उमंग ल्याउने गर्छ । नारी प्रकृति हुन् र सृष्टीकी प्रतिक हुन् । उनैको पूजा आराधना गर्ने अनि प्रसाद स्वरुप निधारमा टिका लगाउने र कानमा समृद्धिको प्रतिक जमरा लगाउने पर्व हो दशैं । त्यसैले यो कुनै जाति, धर्म , सम्प्रदाय वा भूगोल विषेशको भन्दा पनि नारी जातिको सम्मान गर्ने सम्पूर्णं मानव जातिको पर्व हो यो । दशैसंग नारी पुजनको कुरा मात्र कहाँ जोडिएको छ र ? सहर देखि गाउँसम्म घरको लिपपोत तथा रंग रोगन गर्ने अनि बाटोघाटो, धारा– पंधेराको सरसफाई गर्ने, देश तथा विदेशमा रहेका आफन्त र प्रियजन जमघट हुने अनि मान्यजनबाट सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र प्रगतिको आर्शिवाद लिने पर्व हो दशैं ।
आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा देखि नवमीसम्म विभिन्न रुपका नारी शक्तिको पुजा आराधना गर्ने र दशमीका दिनमा प्रसाद स्वरुप टीका, जमरा लगाउने यो पर्व जातिका मात्र हुने कुरै भएन । सृष्टीकर्ता नारीको पूजा आराधन गरिने पर्व त सबै नेपाली र विश्व मानव समुदायको नै साझा पर्व पो हो त । विजया दशमी अन्र्तगत पहिलो दिन शैलपुत्रीको नाममा नारी शक्तिको पुजा आराधाना गरिन्छ भने दोस्रो दिन ब्रम्हचारीणी तथा तेस्रोे दिन चन्द्रघण्टाको पुजा गरिन्छ । यसरी नै चौथो दिन कुष्माण्डा तथा स्कन्दमाताको पाँचौं दिन र छैटौं दिन कात्यायनी तथा सातौं दिन कालरात्री को रुपमा नारी शक्तिको पुजन गरिन्छ । आठौं दिनमा महागौरी र नवौं दिनमा सिद्धिदात्रीको पुजा गरिन्छ । र अन्तिम दिनमा प्रसाद स्वरुप टीका तथा जमरा ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।
असत्यमाथि सत्यको विजयका प्रतिकको रुपमा मनाइने यो पर्व वास्तवमै सम्पूर्ण मानव समुदायको साझा पर्व हो । यद्यापि यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण आफन्त, प्रियजन ठूलो संख्यामा जम्मा हुने र भव्यताका साथ दशै मनाउने अवस्था रहेको छैन । अहिलेको दशैं भनेको जो जहाँ छौं, त्यही रहेर दशैं मनाउने र कोरोनाको संक्रमणबाट सुरक्षित रहने हो ।
स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै विधिहरु अपनाएर दशैं मनाऔं भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । संक्रमणबाट जोगिएर रहन सकेमा फेरी आगामी वर्ष हार्षाेल्लासका साथ दशैं मनाउन पाईन्छ । देवी दुर्गाले हामी सबैमा काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता विकार त्याग्ने शक्ति प्रदान गरुन । विजया दशमीको अवसरका पाठक, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक, लेखक सबैमा हाम्रो शुभ कामना !
असक्षम नेतृत्वले चुनौतिको सामना गर्दैन
अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजाले उब्जाएको प्रश्न
कोरोना सृजित अवसर